Yedu Yemagariro Kutarisirwa muSocial Media | Martech Zone
Yedu Yemagariro Mutoro muSocial Media
China, January 19, 2012 China, January 19, 2012 Douglas Karr
Kunyangwe iwe uchifarira kana kwete, sezvo kambani yako inotanga kuvaka nhaurirano munhau yemagariro iwe une basa. Iwe une basa kune vateereri vako uye nekambani yako kusimudzira mhando yeaya hurukuro. Ini ndinovenga kushanyira hombe midhiya kuburitsa uye kusaona chinhu kunze kwekunyepa, troll uye spammers vanotora peji. Zvinondiudza kuti kuwedzera izwi rangu kune musanganiswa ndeye hakuna ukoshi kusangano.
Ndakabvunzurudzwa svondo rino na WIBC, chiteshi chenhau chemuno. Musoro wehurukuro waive iwo runyerekupe runotyisa kuti mutumbi weIU mudzidzi waLauren Spierer wakawanikwa. Chakanga chisiri chokwadi, asi nhema dzakapararira semoto wemusango.
[odhiyo: https: //martech.zone/wp-content/uploads/2012/01/11812_afternoonnews_netrumorsspreading.mp3 | titles = WIBC Internet Runyerekupe]
Zvinosuruvarisa kuti manyepo anopararira… kunyanya kudaro dzimwe nguva pane chokwadi. Kana kambani yako iine bhurogu ine makomenti, peji reFacebook, account yeTwitter kana chero imwe foramu yemushandisi inogadzira mhinduro, une basa rekugadzirisa nhaurirano ipapo. Iwe une basa kwete kwete chete kune yako kambani, asiwo kune vateereri vako.
Chengetedza uye utaure spam yakatumirwa kuakaunti yako ye Twitter (nyora ivo ku @spam). Usatendere zvirimo zvisiri zvechokwadi, zvinokuvadza, kana kudheerera. Uye kupokana nenyaya dzepamhepo izvo zviri mune zvaunofarira - senge mumwe munhu ari kushoropodza kambani yako. Uchitenda kana kwete, vanhu vachadzivirira kambani iri kuzvidzivirira pachayo. Uye, kana zvese zvimwe zvikatadza, bvisa zvataurwa. Zvirinani kusava nehurukuro pane kupa imwe troller ine svikiro kuti ikanganise mukurumbira wako.
Muchiitiko chaLauren Spierer, kukuvara kwacho kwakapfuura mukurumbira wekambani. Semunhu anoshandisa vezvenhau, ndinovimba unozvitora pachako kupokana nenhema, runyerekupe, kutsika-tsika nekushusha online. Gakava rakakura chinhu chimwe chete ... asi kuparadzira ruvengo nekusagutsikana chinhu chisina kana mumwe wedu anofanira kuregerera.
Chinyorwa chekupedzisira: Handitendi kudzvinyirirwa nehurumende yekutaura kweruvengo kana zvimwe zvakafanana. Ini ndinotenda manzwi iwawo, kunyangwe achinyangadza, anoda kuti anzwike nekuonekwa. Asi hazviitike pane yangu pfuma uye hazvifanire kuitika pane zvako.
Tags: internet makuhwalauren spierertwitter makuhwa
PIPA / SOPA: Zvemahara Zvemukati Zvinogona Kutiuraya isu
Delivra Inotangisa Nyowani Webhusaiti
Jan 21, 2012 pa 2: 43 AM
Kekutanga nguva pano, uye kunzwa rombo rakanaka!
Zvakaitika vaviri vaviri vanyori vangu bhurogu vakarwiswa nenzira inogumbura nemuverengi akatsamwa, moderating hurukuro yakakosha mune iyi kesi!
Chengeta podcast kumusoro Douglas, zvakanaka zvinhu!